Split PDF - An-Tserasera, Azo Antoka, Manokana Ary Maimaim-Poana
Asio fizarana PDF ho pejy iray. Ny fitaovana PDF anay dia tsy mamindra ny rakitrao amin'ny Internet satria ny navigateur mihitsy no manao ny asa amin'ny rakitrao. Voaaro tsara araka izany ny fiainanao manokana sy ny fiarovana anao.
Amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity dia miombon-kevitra amin'ny Fepetraky ny serivisy sy Politika Fiarovana fiainan'olona ianao.
Fampidirana ny fitaovana Fitaovana PDF amin'ny Internet
Fitaovana PDF dia fitambarana fitaovana PDF ahafahanao manao ny asa mahazatra sy mahasoa indrindra amin'ny rakitra PDF. Ny fitaovanay dia miavaka: tsy mila mamindra ny rakitrao any amin'ny mpizara izy ireo mba hikarakarana azy ireo, ny asa atao amin'ny rakitrao dia ataon'ny navigateur eo an-toerana.
Ny fitaovana PDF an-tserasera hafa dia mazàna mandefa ny rakitrao any amin'ny mpizara iray mba hikarakarana azy ireo ary avy eo dia alefa any amin'ny solosainao ireo rakitra vokarina. Midika izany fa raha ampitahaina amin'ny fitaovana PDF hafa ny fitaovantsika dia haingana, ara-toekarena amin'ny famindrana angon-drakitra, ary tsy mitonona anarana (voaaro tanteraka ny fiainanao satria tsy nafindra amin'ny Internet ny rakitrao).